Ipaki yezilwanyana zase-Safari West: Njenga-Afrika eNapa Valley
Eunited States California Napa & Sonoma
I-Safari West ininzi kakhulu kuneZoo
Ukuba uke wathanda ukuhlala kwindawo yokuxhamla xa ujikelezwe yintlango eNapa Valley, i-Safari West Animal Park ingaba yindawo efanelekileyo kuwe.
I-Safari West inekhaya kunezilwanyana zasendle ezingaphezu kwama-800, kodwa akusiyo i-zoo. Kunoko, i-wild acre 400 egcinwe kwi-Sonoma County iyinxalenye yokulala kunye nesidlo sasekuseni kunye nenxalenye ye-safari. Kusondele ukuya ekhaya (ininzi lethu) kuneAfrika, ephakathi kweSanta Rosa kunye neCalistoga, ngasentla kweNapa Valley.
Unokuhlala ubusuku obunobuncwane bamathente obukhulu-okanye uthathe enye yezohambo ezikhokelwayo. Kuyinto ejabulisayo yeentsapho kunye nabani na othanda ukubona izilwanyana zasendle. Ungakwazi nokuphunga i-champagne kunye ne-giraffes uze uhambe nge-safari phantsi kwelanga laseKalifornia elifudumeleyo.
IiNdwendwe zeeNdwendwe kwi-Safari West
Ii-jeep ze-Jeep ze-Safari zaseNtshona zivulelekile kuluntu, nokuba ngaba awuhlali ebusuku. Ukuba u tyelela iNapa Valley ngeveki, cinga ngokuthatha ikhefu kwi-wineries ukutyelela, njengoko i-Safari West ibeka, "umoya we-Afrika entliziyweni yelizwe lewayini."
Ungathatha iholide ye-Safari Adventure yeeyure ezintathu okanye uhambo lwe-Serengeti Trek lokuhamba ngekota. Unokubona iimbombo, i-blue wildebeest, i-tap buffalo, izinkomo ze-watusi kunye ne-kudu. Ezi zimbalwa zezilwanyana ezingaphezu kwezi-800 ezihlala kwi-Sonoma Serengeti e-Safari West.
Kwi-touric ye-adventure ye-adventure, abantwana kufuneka babe ubuncinane iminyaka emine ubudala. Abantwana abaneminyaka engaphantsi kweminyaka engama-4 banokujoyina iqela labo kwiqonga lokuhamba kuphela kweholide kuphela.
Ukongeza kwiiholide zabo eziqhelekileyo, i-Safari West inika neekhenketho zangasese kunye nohambo oluthile, kuquka uhambo lwezondo zoLusuku lwe-Valentine, i-photo safaris kunye ne-sunset safaris.
Ukuhlala ubusuku obude e-Safari West
I-Safari West ivulekile ukuhlala ubusuku bonke ngoMatshi ukuya ngoDisemba. Banikela ngeendlela ezimbalwa zeentente zokunethezeka kwaye bakhonza ukutya kwasekuseni.
Ubusuku obuse-Safari West buya kuba neendleko malunga nehotele ye-luxury kwiCalistoga eseduze, kodwa ngemihla ekhethiweyo, banikezela iirhafu ezithengiweyo, ezibhalwe kwiwebhusayithi yabo.
Iindawo zokuhlala zihlala "zincinci" (iindawo ezithandekayo zentente) kwiindawo eziphambili, kunye nemibhede epholileyo, imvula ebushushu, iiplanga eziphosiweyo, izitya zobhedu ezindlini zangasese zangasese, kunye nefenitshala yesandla esinezandla. Yiyo indawo efanelekileyo yokufumana iintsapho ezikhangeleleneyo kunye nokunethezeka, kunye nabahlobo abafuna ukubalekela entlango, kodwa bafuna ukuba netrone ye-porcelain kufuphi.
Abantwana babo bonke ubudala bayamkela. Ukuba abaneminyaka engaphantsi kweminyaka emibini ubudala, akukho ntlawulo eyongezelelweyo ukuba bahlale. Ukutyelela i-Safari West ngenjongo yokukhumbula umkhosi wokuzalwa wosuku okanye ukuphathwa kwintsapho yakho ekuphefumleleni kwangempela kwindawo yokuzivocavoca.
Oko Kufuneka Ukwazi Nge-Safari West
Ukutyelelwa kunikwa imihla ngemihla. Ukugcinwa kwempahla kuyadingeka kokubili ukuhlala ubusuku nohambo lwee- safari. Ukutyelela kwiwebhsayithi ye-Safari West ukuze uthole ulwazi oluninzi.
Akukho zifuywayo ezivunyelwe kwi-Safari West nanini na. Oko kukugcina isilwanyana sakho kunye nezilwanyana ezikhuselekileyo. Izilwanyana zasevisi azivumelekanga kwi-Safari Tour, kwaye azinakuhlala emva kweso sithuthi sakho ngasese xa uhamba ngaphandle kwazo.
Unayo ikrate enokufumaneka kwenkampani yenkonzo yesilwanyana ngelixa usendwendwe, kodwa kufuneka uqhagamshelane nayo ngaphambi kwexesha ukuyigcina.
Indawo: Nangona idilesi ye-Safari West ithi i-Santa Rosa, basondele kakhulu kwiCalistoga. Unokufika apho ukusuka kwidolophu.
I-Napa With Kids: I- Napa Valley ingabantwana, ikakhulukazi kunye neendawo ezifana ne-Safari West kunye nemifuno yokufumana abantwana . Nangona abantwana bakho bengafanele babe neengxaki zokuhlala banomdla ngelixa bepaki, kungenwabayo ukudala ukuzingela abazingelayo ukuba badlale nabo ngexesha lokutyelela kwezilwanyana zasendle. Jabulela uhambo lwakho ukuya epakini nakwiindawo ezikufutshane kunye nesi sikhokelo kwiintsapho zeholide eNapa Valley .
Iinyanga zeeNkobe zeeNdwendwe zeeNdwendwe
I-Sonoma yelizwe leNdawo yeGay Hotels Guide
Festival yeNew Valley
Napa Valley e Spring
Ukufuduka kwintlambo kwiSanoma Valley
Hlola i-Rock 'n' Roll Museum yaseLondon kuphela
Ukufumana i-Albuquerque ngeTeksi
Isikhokelo esiphezulu se-2017 US Vula e-Erin, eWisconsin
I-Daytona Beach Weather
Isikhokelo sakho kwisixeko saseBerlin saseKreuzberg-Friedrichshain
Izinto ezili-10 EZINGENZIWENZI eBerlin
I-BIXI: Inkqubo yeBhasiki yoLuntu yaseMontreal 2017 Imirhumo kunye nexesha
Ubusuku obuvulekileyo - iSikhumbuzo seNkuka kaNyaka omNyaka weNew yaseKlahoma
Izinto Ezozenza eNtshona Texas
Yiyiphi ihotele eneyona nto ibonelele kwiDenver?
I-William G. Mather Museum
Iindlela ezili-7 zokuphucula iholide yakho ye-NYC
Disney World ngoJanuwari
Ngo-Apreli 2018 iMithendeleko kunye neZenzo kwi-Washington, DC